Ndekọ Ọnụ Ọgụgụ ụwa: Falls na Mmerụ maka Ndị Agadi na Ndị Agadi | Ngwọta OMG
Ndekọ Aging Global aghara: Ọkpụkpụ na nhụsianya nke Ndị Agadi na Ndị Agadi
Data na dara na ndị agadi
Ịda bụ ihe nke ịdaba n'ala n'ala. A na-ejikọta Falls na ụkọ anụ ahụ, neuromuscular na ọkpụkpụ na nkwonkwo (Dargent-Molina na Bréart, 1995) na ọdịda nke na-akpata trauma bụ isi ihe kpatara ọnwụ na njedebe. Na ndị agadi, ọ bụ isi ihe kpatara ọnwụ ọnwụ (Dargent-Molina na Bréart, 1995; CFES, 1999). Ná mba ndị mepere emepe, a na-eme atụmatụ na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị agadi agadi 65 ma ọ bụ karịa na ibi n'ụlọ na-ada kwa afọ (DargentMolina na Bréart, 1995) na nke a na-abawanye na afọ. Ụmụ nwanyị dị ihe dị ka okpukpu abụọ ka ha daa karịa ụmụ nwoke, ọ bụ ezie na ọdịiche a dị n'etiti ndị ikom na ndị inyom na-apụ n'anya mgbe ọ ka na-eto eto; mgbe afọ 80 gachara dị ka otu, mgbe afọ 85 gasịrị, enwere ike iji ya tụnyere (Dargent-Molina na Bréart, 1995). Ọ bụ ezie na ọkpụkpụ aka nke ọdịda dị oke agbanwe agbanwe, ha na-akpalitekarị inwe obi ike nke onwe ya nke nwere ike ime ka mmepe nke ọrụ arụ ọrụ (Vignat, 2001). Maka ụfọdụ ndị, ọdịda ga-eme ka mgbatị na ebelata na ịdaba. Ọkpụkpụ na-eme na 5% nke ọdịda, nke kachasị njọ bụ mmebi ụkwụ nke femur (ihe na-erughị 1% nke ikpe) Mkpa ndị ọzọ na-achọ nlebara ahụike, gụnyere mgbatị, sprains, hematomas na ọnyá miri emi chọrọ ịkọ, ga-eme na 5% ka 10% nke dara.
N'okwu kachasị njọ, ịdaba nwere ike ịkpata nnukwu ọrụ nke ịrụ ọrụ nke nwere ike ime ka ọ dị mkpa mgbe ọ gasịrị-etinye aka n'ụlọ ọgwụ n'ụlọ ọgwụ. A pụrụ iji anya nke uche hụ na ọ na-ada oge na ihe ndị na-apụta n'ụdị pyramid. Ebumnuche a mepụtara site na iji data sitere na ọmụmụ ndị e mere na Quebec ma na - ejikọtakwara ihe ọmụmụ nkuzi (Dargent-Molina na Bréart, 1995) mere. O gosiputara mmetụta nke ọdịda na ndị agadi. Na 1998 na Quebec, ihe karịrị 300,000 dara na-akọ na ọnụ ọgụgụ nke mmadụ karịrị nde mmadụ nọ na 65 ma ọ bụ karịa. Ihe karịrị ọkara nke ndị a dara ugboro ugboro. N'ihe niile, 50,640 dara kpatara mmerụ ahụ nke chọrọ nlekọta ahụike, 12,681 dugara n'ụlọ ọgwụ na 600 kpatara ọnwụ. Ọnụ ọgụgụ ndị France bi na ya na-agụ 9 nde mmadụ n'otu n'otu na ọdịda na-eme atụmatụ na 2,700,000. Ihe ndị a na-akpata mmerụ 450,000, ụlọ ọgwụ na 110,000 na karịa 5,000 ọnwụ. Enweghị ihe ọmụma dị otú ahụ na Belgium na Switzerland, mana ndị a sitere na Quebec na France nwere ike ịkọwapụta ihe dị mkpa na ndị agadi.
Mmiri bụ ihe dịgasị iche iche nke ihe dị mgbagwoju anya na ihe jikọrọ ya. Ebe ọ bụ na 1980s, ihe karịrị 400 ọdịda ndị ọkachamara kọwapụtara. Enweghi ike ịkọwa ihe dị mkpa gbasara ihe ize ndụ dị iche iche na mmekọrịta ha. Nnyocha na-atụ aro na mkpa nke otu ihe ọ bụla dị ntakịrị na nke dara adaba n'ihi ọtụtụ ihe na-emekọ ọnụ Nke a, ihe ize ndụ nke ịdaba n'ime afọ na-abawanye ụba na ọnụ ọgụgụ nke ihe ize ndụ: site na 8% mgbe ọ bụla ihe ize ndụ dị na 78% mgbe anọ ma ọ̄ bụ karịa ihe ize ndụ dị. Na akwụkwọ sayensị, a na-ekwukarị ihe ndị dị ize ndụ n'ihe gbasara ụzọ mmekọrịta atọ, ya bụ ọnọdụ ahụ ike nke onye agadi, àgwà, na gburugburu ebe obibi. Iji mee ka ntụziaka nke Nduzi a dị mfe, a ga-akọwapụta akụkụ atọ a iche iche. Otú ọ dị, a ga-enye aka ederede n'akụkụ ọ bụla o kwere mee iji gosipụta ọdịdị ọdịdị nke ọdịda na ọtụtụ mkparịta ụka n'etiti ihe ize ndụ. Ọ bụ ezie na ọrụ nke ụfọdụ ọnụ ọgụgụ ihe ize ndụ na-ada ada ka a ghọtara nke ọma taa, ozi ka na-adịkwaghị maka ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, nchọpụta banyere omume (dịka, ihe ize ndụ, oriri na-edozi ahụ) na ihe gbasara gburugburu ebe obibi bụ akabeghị aka, n'ihi na ọmụmụ ihe a na-esiri ike ịmepụta na ọbịbịa ha siri ike ịtụle.
Ọnụ ọgụgụ nke ụba na-abawanye na afọ. A na-eme atụmatụ na n'afọ ọ bụla, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị agadi nọ na 65 na ọkara nke ndị na-elekọta 85 ga-ada otu ugboro ma ọ bụ karịa. Ihe ngwakọta nke ịka nká na ọrịa ndị metụtara afọ na-eme ka ohere ịdaba na oke ike nke mmerụ ahụ pụta (Dargent-Molina na Bréart, 1995). N'ime afọ ole na ole, ọbụlagodi ndị na-adịghị eweta ihe ọ bụla metụtara ihe ize ndụ kwesịrị itinye aka na ụfọdụ usoro mgbochi, karịsịa arụmọrụ nkịtị. A na - egosipụtakarị ihe ndị ọzọ metụtara mmekọrịta ọha na eze nke na - eme ka ohere nke ọdịda dị elu pụta ìhè n'ọmụmụ ihe. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ihe ndị a enweghị ike ịmegharị, ma ọ bụ enweghị ike ịmegharị ngwa ngwa, ha na-enye ozi maka ịchọta obodo ndị agadi bụ ndị kwesịrị ịnweta ohere mmemme mgbochi. Ụmụ nwanyị nọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu karịa ịdaba karịa ụmụ nwoke, nke a pụrụ ịkọwa ya site na nkwarụ ọzọ nke anụ ahụ. Ndị bi naanị ha, mgbe ụfọdụ, ndị agadi, nwere ike ịnweta ihe ize ndụ ọzọ mgbe ọdịda dabere na ihe ize ndụ dị ukwuu na-akpata, nke na-etinyekwu oge na ala, nke na-eme ka ọnyà nke ọchịchị obodo dịkwuo. A na-akpọ nke a karịa ndị agadi nọ naanị ha ma ọ bụ ndị na-adịghị enweta nkwado mmadụ.
Nzuzo 11818 9 Echiche Taa